15 Mitambo yakaita saRoblox (2020) - Zvakanakisa Dzimwe nzira - Kutamba
15 Akanaka Mitambo saRoblox (2020)
Asati aburitswa naRoblox, pfungwa yemutambo wekugadzira mutambo waive wakasiyana zvachose. Pakupedzisira, mushure mekuburitswa kwe Roblox , pfungwa dzakashandurwa uye dzakatopa nzvimbo kumitambo yakawanda saRoblox.
Muchikamu chino, tichagovana mamwe akanakisa sandbox uye mazita eMMO akafanana naRoblox munzira dzakawanda. Unogona kuwana mashoma emitambo iyi akachengeteka uye zvirinani pane Roblox futi.
Sei Kutamba Roblox pane Chromebook?
Mitambo yakaita seRoblox - 15 Dzimwe nzira dzekutamba
Trove ndeye Massive Multiplayer Online uye Sandbox mhando yemutambo. Mutambo uyu wakafanana neRoblox uye unoita kuti vatambi vawane uye vaongorore nharaunda uye vaite zviitiko zvinonakidza.Unogona kuvakawo imba yako inozivikanwa sedombo rekona.
Mutambo unotorega ivo vatambi kuti vasarudze kubva kumakirasi akasiyana emitambo saiyo Knight kana Dracolite.Iwe unogona kunyange kugadzirisa hunhu hwako zvichienderana nesarudzo yavo wega.
Roblox Promo Makodhi & Wiki
Gadzirisa Roblox Kanganiso Kodhi 267
2. Garry Mod
Uyu mutambo unopa zvinoshamisa mifananidzo. Kusiyana nemimwe mitambo yepamhepo yakafanana neRoblox, Garry's Mod mutambo hauna chinangwa.Iwe unogona kuita zvese zvaunoda kuita mukati memutambo uyu. Zvakare, iwe unogona kushandisa izvo zvinhu kugadzira zvombo zvitsva, zvemamiriro ekunze, uye kunyangwe mota.
Uchishandisa zvisikwa zvako unogona kungotyaira uchitenderedza nharaunda kana kutobhururuka kuti uwane uye kuongorora yega uye zvese.Mod yaGarry inotorega ma gamers ayo kushamwaridzana sezvo ichitsigira Multiplayer Gameplay.
3. MushambadziMiner Z
Castle sandbox mutambo. Iyo nharaunda nharaunda yemutambo inoita kunge yakafuridzirwa neMinecraft. Kuti urarame mumutambo, iwe uchafanirwa kugadzira zvombo uye kushandisa zvombo zvakafanana kurwisa zvikara.
Uchishandisa iyo yekugadzira modhi iwe unogona kushandisa akasiyana mabhureki kugadzira akasarudzika masisitimu uye iwe unogona kunyange chengetedza zvisikwa zvako mumutambo izvo zviri pachokwadi zvinongoshamisawo kwazvo.CastleMiner Z inowanikwa chete paWindows PC.
Iyo Blockheads yakasarudzika mutambo wekupona. Iyo inobvumira vashandisi vayo kugadzira, kuvaka, kuongorora, uye zvimwe zvakawanda mukati memutambo. Inowanikwa kune maApple eApple neIOS. Zvitsva maficha zvinowedzerwa kumutambo neyakajairika software kugadzirisa zvakare.
MuBlockheads iwe unogona kutsvaga nzvimbo mumamiriro ekunze akasiyana uye mwaka zvakare.Paunenge uchitamba uyu mutambo, iwe uchasangana nemazhinji chaiwo-ehupenyu mamiriro senge inotonhora mamiriro ekunze panguva dzehusiku. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unozofanirwa kushandisa zviwanikwa zvako kugadzira musasa wemoto uye kurarama mumutambo.
5. Chipfuyo Jam
Animal Jam mutambo wakasarudzika saRoblox uye hautombodi kurodhaodha sezvo iri online mutambo. Zvakafanana naRoblox, Mu Animal Jam kutamba iyi mitambo sehunhu hwemhuka.
Paunotamba mutambo uyu kekutanga, unogona kunzwa sekunge mutambo uyu unogadzirirwa vechidiki asi paunenge uchitamba mutambo uyu, unova unonakidza nenzira. Mhuka dzinogona kugadziriswa maererano nesarudzo yako.
6. Lego Nyika
Ngatitaurei chokwadi, chaive chishuwo chedu chehudiki kuve neyedu hombe muunganidzwa weLego Blocks. Nekutamba Lego Nyika dzepasi rose iwe unogona kuita yako yehudiki kurota kwekuva neyako risingagumi lego anovharira chaicho kunyangwe izvozvi. Izvo zvakafanana chaizvo naRoblox, Lego Worlds inopa kuongorora nharaunda.
Chinhu chinoshamisa ndiyo nharaunda yese yemutambo uyu inoumbwa nezvidhinha zveLEGO. Iwe unogona kugadzira chero chaunoda mune ino sandbox -style mutambo.
Kana iwe uchida kutamba Roblox saka Mythruna mutambo wakanaka kwauri. Paunenge uchitamba Mythruna iwe unonakidzwa nekuvaka kwakakura uye hunyanzvi zvinhu mukati memutambo.
Zvakare, pane diki-yekutamba mutambo wemitambo muMyruna pachayo. Sekureva kwevagadziri, mutambi wega wega anozove chikamu chenyaya yakasarudzika zvichienderana nemaitiro avo.
Uyu mutambo wakafanana neLego Worlds. Blockland iri chaizvo mutambo wekuvaka zvidhinha uyo unoita kuti vashandisi vayo vaongorore nharaunda uye nekuvaka zvivakwa munzira.
Uyu mutambo wejecha rebhokisi unogona kutambidzwa mune ese ari oga-mutambi pamwe nemamodheru emitambo yakawanda.Blockland iri online mutambo wevadzidzi vakawanda.
Mumwe mutambo wakaita saRoblox pane iri runyorwa ndiCreativerse. Iyi sandbox mutambo wakasununguka kutamba. Ndiwo mutambo wekupona unopa kuongorora nharaunda uye paunenge uchiongorora uchasangana nemiti nemhuka.Sezvinoenderana nezvaunoda iwe unogona kutamba mutambo uyu neshamwari kana mhuri kana pane yeruzhinji maseva futi.
Kana iwe uchifananidza iwo magirafu, Creativerse iri nani kupfuura Roblox.Iwe unogona kutamba nyore nyore Creativerse paWindows uye macOS makomputa uye desktops.
Minecraft mumwe mutambo wakakurumbira uye une zita hombe mune Massive Multiplayer Online mhando yemitambo. Uyu mutambo unoita kuti vashandisi vawo vavake chero chavangambofungidzira. Minecraft yakabatsira kuzvirumbidza imwe yenharaunda huru uye inoshingaira yemitambo.
Kunyangwe uyu mutambo uine yakaderera-mhando mifananidzo. Asi, mutambo uyu unopa nharaunda dzinoshamisa kune vashandisi varo semapako, miviri yemvura, masango, nezvimwe zvakawanda. Kuti uenderere mberi, iwe unofanirwa kungofamba uchitsvaga nharaunda, uye kupedzisa mamwe mabasa chaiwo.
Panzira yako, unogona zvakare kurwiswa neZombies kana madandaude, nezvimwe zvisikwa zvinokuvadza zvakare. Unofanira kutakura zvombo kuti uzvidzivirire.Minecraft inowanikwa pane ese mapuratifomu emitambo iwe aunogona kufunga uye zvakazara ndeimwe yemitambo yakanakisa.
Kana iwe uchitsvaga dzimwe nzira dzeRoblox saka tarisa KoGaMa. Uyu mutambo unogona kutaridzwa seimwe yemitambo inodhakwa seRoblox.Uyu mutambo unopa vatambi vakawanda mutambo muoti. Saka, unogona kunakidzwa neshamwari dzako dzepamhepo.
Sezvinoenderana nezvaunoda, unogona kugadzira nekugadzira mutambo wako kana kutamba mitambo inogadzirwa nevamwe.Zvakare, papuratifomu iyi, unogona kuwana mitambo yekupfura, mitambo yeArcade, mitambo yeRPG, mitambo yemijaho, uye mitambo yakawanda yemitambo. KoGaMa inogona kuridzwa pane chero laptop kana piritsi iyo inogona kumhanyisa desktop desktop.
12. Makumi mana
Saka, munhu wese anoziva kuti Fortnite chii. Iyo yemahara kutamba kurwa royale mutambo uyo unogovana akawanda maficha naRoblox.Kutaura chokwadi, magirafu uye mutambo wemitambo muFortnite zviri nani nzira kupfuura mimwe mitambo yakawanda seRoblox. Kune matatu maFortite mitambo anoti, Fortnite: Sevha iyo Nyika, Fortnite Hondo Royale, uye Fortnite Kugadzira. Yekupedzisira inopa yakazara Roblox-kunge Gameplay ruzivo.
Mumutambo weFortiteite, vatambi vanopihwa mukana wekuenda kuchitsuwa chaicho kwavanogona kugadzira yavo yepasirese uye nzvimbo yehondo. Uchishandisa mutambo uyu, unogona kutamba mitambo yakati wandei isiri yepamutemo semitambo yekumhanyisa futi.
Terasology ndiwo mumwe mutambo wakafanana neRoblox. Uyu mutambo unogovana Gameplay zvinhu kubva kune ese Roblox uye Minecraft futi. Kuti uenzanise mumutambo uyu, uchafanirwa kurwa, kupona, uye kupedzisa mabasa munzira.Mumutambo uyu, vatambi vanogona kutarisa pasi rakagadzirwa navo.
Uyu mutambo une akawanda uye akawanda maficha akawedzerwa pairi pamwe neanotevera matsva.
Terraria ndeye sandbox dhizaini mutambo uye yakafanana zvikuru naRoblox. Inopa vashandisi vayo mukana wekutarisisa pamutambo uye kupedzisa mamishini akawanda. Inowanikwa paPC, MAC, Linux, Android, uye iOS.Mumutambo uyu, anonyanya kukosha modhi ari kuchera, kurwa, uye kuvaka. Sekureva kwezita remamiriro ekuvaka, rinonyanya kutsaurirwa kune vechidiki vanhu vekugadzira.
Terraria yakagadzira nharaunda huru pamusoro pemakore.Kuti uende kumatanho epamusoro, iwe unozofanirwa kutora mbishi zvigadzirwa uye zvigadzirwa zvehunyanzvi nekuzvishandisa. Izvo zvinhu zvichangogadzirwa zvichakubatsira iwe kupedzisa mamishini neakawedzera kumhanya.
15. Brawl Nyeredzi
Mune ino nhare mbozha, unogona kutamba uchipesana neAI kana chero vamwe vatambi uye kuvhura hunyanzvi hutsva, Masimba, uye kunyangwe maGajidhi kukwidziridza wako anopokana achitamba.Kana iwe uchida kutamba Roblox ipapo Brawl Stars inogona kunge iri yakanakisa Roblox imwe nzira iwe.
Iyo inovandudzwa naSupercell. Brawl Stars inopa akawanda akasiyana Gameplay modes mukati memutambo seGem Grab, Showdown, Bounty, Heist. Zvakare, zviitiko zvakawanda zvakakosha zvakaitirwa mukati memutambo uyu.Zvakare, uyu mutambo wakasununguka kurodha pasi uye kutamba.
Saka iyi mimwe yemitambo yakanakisa yakafanana neRoblox uye yakakodzera kutamba.Unogona kuyedza iyi mitambo uye woona kana uchiida.
Rabb.it Dzimwe nzira
Instagram Statistics & Chokwadi (2020) - Zvese Zvawakapfugama Kuti Uzive
Yakanakisa Cable TV Dzimwe nzira 2020 - Cheka iyo Tambo Nhasi
tarisa ingo enda nayo megashare
kodhi yechipo yemweya muchengeti
kushandisa chromecast pasina internet kubatana
akanakisa mafirimu mawebhusaiti emahara
skyrim pamwechete yakavhurika beta zuva